Fiarovana ny angona manokana | mTomady.mg
Pôlitikan’ny fihazonana ho tsiambaratelo – Fiarovana ny angona manokana
Ity pôlitika fihazonana ho tsiambaratelo ity dia novolavolaina mba hanomezana toky ny olona ny amin’ny fampiasana izay zava-pantatra mora hita mahakasika azy amin’ny “internet”. Ny zava-pantatra mora hita mahakasika olona iray dia afaka mandeha irery na miaraka amin’ny zavatra hafa ho famantarana, hifandraisana na ahitana ny misy ilay olona, na hamantarana olona iray ao amin’ny tontolony. Manasa anao hamaky ny pôlitikan’ny fihazonana tsiambaratelo mba ahazoanao tsara ny fomba fanangonanay, fampiasanay, fiarovanay na fitantananay ny zava-pantatra mahakasika anao manokana, izay mifanaraka amin’ity trano-kala ity.
Inona avy ireo zava-pantatra mahakasika ny olona mitsidika ity trano-kala ity angoninay ?
Tsy maka ny mombamomba ireo olona mitsidika ny trano-kala izahay.
Rahoviana no manangona ny zava-pantatra izahay ?
Manangona ny zava-pantatra avy aminao izahay rehefa mampiditra izany ato anatin’ny trano-kala ianao.
Ahoana ny fomba fiarovanay ny zava-pantatra mahakasika anao?
Mampiasa “scan anti-Malware” matetika izahay. Tsy mangataka zava-pantatra manokana toy ny anarana, adiresy mailaka na laharan’ny karatra fakana vola izahay.
Mampiasa “cookies” ve izahay ?
Tsy mampiasa “cookies” ho fanaraha-maso izahay.
Fanapariahana amin’ny olon-kafa
Tsy mivarotra, na manakalo na mampita ny zava-pantatra mahakasika anao amin’ny hafa izahay.
Fifandraisana amin’ny hafa
Tsy mampiditra na mandroso vokatra na tolotra hafa eto amin’ny trano-kala izahay.
Ireo zavatra takiana amin’ny dokam-barotry ny Google dia voafehin’ireo fenitra amin’ny dokam-barotry ny Google (fenitry ny dokam-barotry ny Google). Natao hanatsarana ny fampiasan’ny mpanjifa izy ireny. https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=fr
Mampiasa Google AdSense Advertising ao amin’ny trano-kala izahay.
Noho ny fiaraha-miasa amin’ny Google dia misy “cookies” miseho eo amin’ny trano-kala. Afaka arindra ny fisehon’izany amin’ny alàlan’ny “Paramètre d’annonces Google” na foanana tanteraka amin’ny alàlan’ny Network Advertising Initiative.
Ny fiarovana ny zava-pantatra mahakasika ny ankizy amin’ny “internet”
Ny lalàna momba ny fiarovana ny mahakasika ny ankizy amin’ny “Internet” dia milaza fa omena andraikitra hanara-maso ny ray aman-dreny.
Fanajana ny zava-pantatra mahakasika ny olona iray
Raha toa ka misy tsy fanajana ireo akora-pahalalana ireo dia mandefa mailaka fampahafantarana anao izahay ao anatin’ny 7 andro fiasana.
Manohana ny fenitra fanarenana ny isam-batan’olona ihany koa izahay. Izany hoe manana zo hitory ireo mpanangona akora-pahalalana tsy manaja lalàna. Io fenitra io dia midika fa afaka mitory ireo mpandika lalàna any amin’ny fitsarana, izay manao ny fanadihadiana ilay olona.
Ny lalàna CAN SPAM dia lalàna mamolavola ny fitsipika mikasika ny mailaka ara-barotra, mamolavola ny zavatra takiana amin’ireo hafatra ara-barotra, manome zo an’ireo olona andefasana ny tsy fandraisana mailaka, ary manambara ny sazy mifanaraka amin’izany. Raha toa ka tsy te ahazo mailaka intsony ianao any aoriana, dia afaka manoratra aminay amin’ny alàlan’ny info@mtomady.de ianao koa alanay haingana amin’izay fandefasana vaovao rehetra.
Mifandraisa aminay raha toa ka manana fanontaniana mikasika ity pôlitikan’ny fihazonana tsiambaratelo ity ianao. Afaka mampiasa ireto fomba fifandraisana manaraka ireto ianao :
Près-Lot II Y 53 bis |
Rue Dr Rabenoro | Antananarivo, Analamanga 101 | Madagascar